lundi, 24 janvier 2022 20:23
Pilo kely : Ho aiza ihany zany ?
Ilazana ianareo amin'ny faritra iva hiala aingana eny amin'ny misy anareo fa ho tondraka ny rano.
Ilazana koa ianareo eny amin'ny faritra avo hiala teny fa hianjera ny tany sy ny vato.
Asa aiza ny faritra moyenne asiana ny tena amin'izany.
Aza dia matory loatra e, sady ny mpangalatra manjeky andro alina avy orana tapaka jiro io.
lundi, 24 janvier 2022 20:01
Toliara : Tapaka rano, tapaka jiro, maripana 42°C
Andro vitsivitsy izay dia niakatra tokoa ny maripana eto Toliara.
Manampy trotraka ny fahatapahan'ny rano sy jiro.
Amin'ny 8ora alina izao, dia tafakatra 42°C ny maripana ato anatin'ny haizina sy tsy fisian-drano.
lundi, 24 janvier 2022 19:43
Ampasika : Ahiana hihoatra ny fefiloha ny rano
Io hariva amin'ny 5ora30min teo dia efa safovavany amin'ny haavon'ny fefiloha eo ambanin'ny tetezana Ampasika eo ampitan'ny Akoor digue iny ny rano.
Manahy ny mponina manodidina fa raha avy indray ny orana anio alina
dia tsy maintsy hihoatra an'ilay fefy ny rano.
Mihezaka manamafy izay fefy somary manify izay ireo mponina satria raha sanatria ka mihoatra io fefiloha io ny rano dia hianaka ka ho dibon-drano daholo hatreny fokontany Amberivatry sy Itaosy ambanin'ny cité iny.
lundi, 24 janvier 2022 19:17
Ankatso : Manao hetsika ireo mpianatra noho ny fahatapahan-jiro
Nanomboka tamin'ny 5 ora hariva teo, nanakan-dalana ireo mpianatra, ary tonga ny Mpitandro ny filaminana. Nifandraharaha teo ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana ka niverina ny jiro, dia niravina ihany.
lundi, 24 janvier 2022 18:40
Burkina Faso : Nalain'ny Tafika ny fahefana
Ny sabotsy hifoha ny alahady 23 janoary 2022 no nihoko ireo miaramila tanatin'ny lakazery maromaro tao Ouagadougou.